Myanmar Man’s Diary » web hosting
cPanel Information Technology | (5)
The following article is written in Zawgyi-2009 font. ဒီတစ်ခာတော့ ဝက်ဆိုက် hosting လုပ်ရာမှာ အသုံးများတဲ့ cPanel အကြောင်း ပြောပာ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ အကြမ်းဖြင်း Introduction ပော့။ သူက နဲနဲ ပြောစရာ များတော့ အသေးစိတ် feature တစ်ခုချင်းကို နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ပြောပာ့မယ်။ သိပ်ကြောက် မသွားပာနဲ့ဦး။ cPanel က သုံးရတာ အရမ်းကို လွယ်ပာတယ်။ cPanel ဆိုတာ ဘာလဲ။ cPanel ဆိုတာ ကိုယ့် ဝက်ဆိုက်ကို webpage ကတဆင့် ထိန်းချုပ်တဲ့ web interface control panel တစ်ခုပာ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အလုပ်တွေကို သီးသန့် software မလိုပဲ web browser ရှိရုံနဲ့ အလွယ်တစ်ကူ လုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ web based application တစ်ခုပာ။ ဒာဆို cPanel ဆိုတာ Blogger interface လိုဟာမျိုးပော့။ သဘောတရားကတော့ တူပာတယ်။ ဒာပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မတူပာဘူး။ Blogger control panel က template ပြောင်းတာ၊ ပိုစ့်အသစ် တင်တာ၊ ပြင်ဆင်တာ လောက်ပဲ လုပ်လို့ ရတာပာ။ cPanel ကတော့ web hosting account တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ် နိုင်ပာတယ်။ ဒာဆို cPanel က ဘာတွေ လုပ်ပေးလဲ။ ဘာတွေ လုပ်လို့ ရလဲ။ Web ...
Setting up your domain name server Information Technology | (1)
အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ပြောလက်စ web hosting အကြောင်း မပြောဖြစ်တာ တော်တော် ကြာ သွားပြီ။ ဒီတစ်ပတ်တော့ နဲနဲ ဈာဉ်ဝင်လာတာနဲ့ဆက်ရေးဦးမယ်။ ဒီတစ်ပတ်တော့ domain name server set up လုပ်တဲ့ အကြောင်း ပြောကြရအောင်။ Domain name server ဆိုတာက ကိုယ့်ဝက်ဆိုက် ဘယ်နေရာ၊ ဘယ် IP address၊ ဘယ်ဆာဗာ ပေါ်မှာ တင်ထားသလဲ ဆိုတာ ညွှန်ပြတဲ့ မာတိကာလို ဟာမျိုးပါ။ ဒီ information တွေကို name server တွေက သိမ်းပေး ထားတာပါ။ ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် ဆိုက်နာမည်လဲ ရွေးပြီးသွားပြီ၊ ဒိုမိန်းလဲ ဝယ်ပြီသွုားပြီ၊ web hosting service မှာလဲ ဝယ်ပြီးသွားပြီဆို နောက်တစ်ခု လုပ်ဖို့လိုတာကတော့ ကိုယ့် Domain Name Registrar ဆီမှာ ကိုယ့် ဆိုက်ရဲ့ DNS server ကို ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့domain registrar နဲ့web hosting service တစ်ခုထဲ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သပ်သပ်ဆီ ထားတော့ ပြောင်းပေးရ ပါတယ်။ ပြောင်းတာလဲ မခက်ပါဘူး။ ကိုယ့် website sign up လုပ်တုန်းက ပို့ လိုက်တဲ့ email မှာ DNS server address ပါပါတယ်။ ဥပမာ ns1.mydomain.com လိုမျိုးပေါ့။ ပုံမှန် DNS name server နှစ်ခု ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် ...
Bamarlay now hosted onanew webhost Information Technology | (0)
Bamarly.com has successfully moved toanew server. The migration took only one day, with no downtime. Withinafew hours of name server change, my visitors can see the site on the new server. The new server is faster (16 CPU compared to4CPU of the previous server). The service provided by the support staff at the new web host is also excellent. Questions are answered promptly, withinafew hours of ticket submission to the support team. Bamarly.com is now proudly hosted by Host Gator. If you would like to have your own website, I highly recommend hostgator ...
Signing up for web hosting Information Technology | (2)
ကဲ၊ ဒီအပတ်တော့ web site sign up လုပ်တဲ့ အကြောင်း ပြောကြရအောင်။ စိတ်ကြိုက် web hosting server ကို ရွေးပြီးပြီ ဆိုပါစို့ ။ ဒါဆို နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့sign up လုပ်ဖို့ ပါ။ sign up မလုပ်ခင် အောက်ပါ အချက် တွေကို အရင် စဉ်းစား သင့်ပါတယ်။ ၁။ domain name registration ကို သတ်သတ် လုပ်မလား၊ web hosting provider ကပေးတဲ့ ဆားဗစ် ကိုပဲ သုံးမလား။ အများအားဖြင့် web host provider တွေက domain registration ကို အခမဲ့ (သို့ ) လျှော့ဈေးနဲ့ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် domain name registration ကို hosting company က ကိုင်ထားတာ ဆိုတော့ အကယ်လို့hosting provider ကို မကြိုက်လို့ပြောင်းချင်တယ်ဆို ပြောင်းရ ခက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ domain registration လုပ်တာက နည်းနည်း ဈေးကြီး ပေမယ့် web host provider ကို မကြိုက်လို့ပြောင်းချင်ရင် အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ ပြောင်းလို ...
Server load and CPU usage Information Technology | (0)
ဒီ server load နဲ့CPU usage policy ဆိုတာက web hosting provider တွေရဲ့ ဝှက်ဖဲပါပဲ။ ဒီနှစ်ခုက web hosting provider အများစု တိတိကျကျ ဖော်ပြလေ့ မရှိတဲ့ အရာတွေပါ။ အနည်းအကျဉ်းသော ဆားဗစ်တွေပဲ ဒါကို သေသေချာချာ ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒါတောင်မှ TOS (Term of Service) ထဲက မထင်မရှား နေရာလေးမှာ ဖော်ပြ ထားတာပါ။ တော်တော် များများ ကဆို လုံးဝကို မပြော ကြတာပါ။ ဒါကလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ က Disk storage space and bandwidth ကို အများကြီး (သို့ ) အကန့် အသတ် မရှိ ပေးထားတော့ တစ်ခြား တစ်ဖက်ကနေ ပြန်ထိန်း ထားတာပါ။ လူဝင်များတဲ့ ဆိုဒ်တွေဆို ဒီ ပေါ်လစီကို သုံးပြီး upgrade လုပ်ခိုင်း တော့တာပါပဲ။ နမူနာ အနေနဲ့အခု ကျွန်တာ် သုံးနေတဲ့ web host ရဲ့ CPU usage and server load policy ကို အောက်မှာ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ Server Limits 25% cpu and or memory for3minutes. Combined ...
Web hosting basic – disk space and bandwidth Information Technology | (1)
အရင် အပါတ်က web hosting service ကို ဘယ်လို ရွေးချယ် ရမလဲ ဆိုတာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ပါတ်တော့ နောက်အရေးကြီးတဲ့ disk space and bandwidth အကြောင်း ပြောကြရ အောင်။ Web hosting service ရွေးတဲ့ အခါမှာ အဲဒီ ဆားဗစ်က disk storage ဘယ်လောက် ပေးလဲဆိုတာလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ၂၅၀ ဒါမှမဟုတ် ၅၀၀ MB ပေးတာ များပါတယ်။ ဒီ storage ဟာ သာမန် ဝက်ဆိုက် တစ်ခု အတွက်တော့ ကောင်းကောင်း လုံလောက်ပါတယ်။ သူ့ ထက် အရေးကြီးတာကတော့ bandwidth ပါ။ Bandwidth ဆိုတာက တစ်လကို ဘယ်လောက် ဒေတာ download လုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာပါ။ webpage တစ်ခုကို ဝင်ကြည့်တိုင်း ဝက်ဆာဗာကနေ ဒေတာတွေ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူ ရပါတယ်။ ဒီလို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရင် လုပ်သလောက်၊ webpage size ကြီးရင် ကြီးသလောက် bandwidth စားပါတယ်။ web hosting service များစုက ၂.၅ ကနေ ၅ GB အတွင်းပေးကြပါတယ်။ ဒီ bandwidth ဟာ သာမန် ဝက်ဆိုက် အသေးလေး တစ်ခုအတွက် လုံလောက်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆိုက်ကို လူသိများ လာပြီ ဆိုရင်တော့ မလောက်တော့ ပါဘူး။ ...
Findingagood web host Information Technology | (1)
ဒီအပတ်တော့ web hosting ကောင်းကောင်း ဘယ်လို ရှာမလဲ ဆိုတာ ပြောပါ့မယ်။ Web hosting လို့ ပြောရင် ဘယ်လို operating system သုံးလဲ ဆိုတာ အရင် ပြောရပါမယ်။ internet web server အများစုက windows server သို့ မဟုတ် linux server သုံးကြတာ များပါတယ်။ ကိုယ့် web page တွေကို ဘာနဲ့ရေးမှာလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး windows server or linux server ကို ရွေးရပါမယ်။ html နဲ့ ပဲ ရေးမယ် ဆိုရင် တော့ ဘာ ဆာဗာ သုံးသုံး ပြဿနာ မရှိပါဘူးး။ ASP pages တွေ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ windows server သုံးရပါမယ်။ အခု ခေတ်စားနေတဲ့ PHP သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ linux server သုံးရပါ့မယ်။ web hosting အားလုံး နီးပါးက linux hosting ပေးပါတယ်။ windows server ကတော့ အချို့web hosting company တွေကပဲ ပေးပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က web site အများစု ကလဲ linux server ပေါ်မှာ run လုပ်တာပါ။ ဒီ ဗမာလေး ...